स्तनको बिकास ! – mYKantipur.Com
स्तनको बिकास !
२०७५, २७ पुष शुक्रबार ०९:०५
किशोरावस्थामा स्तनको तीब्र वृद्धि हुनुको मुख्य कारण चाँही स्तनमा बोसो जम्मा हुनु हो । र स्तनको आकार निर्धारण गर्ने मुख्य कुराचाँही हर्मोन हो, त्यसैले यसको आयतनलाई स्तनले महिलालाई यौन आकर्षण बनाउँछ । स्तनको आकृति तथा आयतनले महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ ।
यो खबर आजको साप्ताहिकबाट ।
तीन सय ६० भैँसीलाई पाँच हजारका दरले सुत्केरी भत्ता, पाडा–पाडीको गरियो जन्मदर्ता !
पहिलो भेटमै यी नायिकाको मुस्कानमा फिदा भएका राजेश पायल !
बुधबार जन्मिनेहरुको स्वाभाव कस्तो हुन्छ ?
एपीएफद्वारा आर्मी पराजित
ग्यास्टिक तथा अल्सरसाथै यी समस्याहरूको अचुक औषधी डल्ले खुर्सानी